Johannesburg ilaa Cape Town duulimaadkeeda South African Airways hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Johannesburg ilaa Cape Town duulimaadkeeda South African Airways hadda
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Soo noqoshada SAA waxay bixin doontaa dheelitirnaan dheeraad ah oo xagga suuqa ah xagga qiimeynta tigidhada. Tan iyo markii uu xamuulku galay oo ka baxay samatabbixinta meheradda waxaa yaraaday awoodda maxalliga ah taasina waxay ka dhigan tahay in tikidhadu qaali noqdeen. Ku soo noqoshada SAA ee cirka waxay ka dhigan tahay qiimayn tartan oo badan waxayna u suurtogelin doontaa in dad badan oo Koonfur Afrika ah ay duuli karaan.
Diyaargarow bilo ah ka dib, South African Airways waxay dib u bilaabi doontaa adeeggii gudaha iyo gobolka Afrika labadaba.
Duulimaadkii ugu horreeyay ee la qorsheeyay ee South African Airways ayaa ka duushay Johannesburg kuna sii jeeday Cape Town 23 -kii September.
Duulimaadyada ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka bilowdaan shan caasimadood oo Afrikaan ah - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka iyo Maputo.
Kaddib bilo diyaarin ah ka dib markii ay ka soo baxeen badbaadinta meheradda, South African Airways (SAA) waxay dib u bilaabi doontaa adeeggii gudaha iyo gobolka Afrika labadaba. Sidaha ayaa ugu horreeya
duulimaadka qorshaysan ayaa ah subax hore oo ka duulaya OR Tambo International ee Johannesburg kuna sii jeeda Cape Town Caalamiga ah 23 -ka Sebtembar waana mid ka mid ah saddex duulimaad oo soo noqnoqda maalin kasta oo u dhexeeya labada magaalo. Duulimaadyada ayaa sidoo kale lagu wadaa inay bilaabaan shan caasimadood oo Afrikaan ah - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka, iyo Maputo.
Maamulaha Ku -meelgaarka ah ee SAA Thomas Kgokolo ayaa leh, “Toddobaadkan waa mid lagu faano oo muhiim u ah SAA iyo shaqaalaheeda iyo sidoo kale dhammaan muwaadiniinta Koonfur Afrika. Socdaalkayagii aan cirka ku soo noqonay ma ahayn mid fudud waxaan ku ammaanayaa shaqaalahayaga u heellan dhammaan qaybaha ganacsiga dhammaantood waxay haystaan ​​oo gelinayaan saacado dheer ka hor maalintaan. Dadku dhinac kasta oo meheradda ka mid ahi ma rabaan wax aan ahayn in SAA ay ku guulaysato annaguna aan dhisno diyaarad cusub oo ku salaysan nabadgelyo iyo adeeg macmiil ku dayasho mudan. ”
Kgokolo ayaa leh inta South African Airways waxay leedahay hamiyo waaweyn waxay ka sarraysaa hab -dhaqanku wuxuu noqon doonaa mid mas'uul ah oo maareyn maaliyadeed miyir leh iyo ballanqaad hufnaan. “Waxaan dib u bilaabeynaa meheraddan iyadoo leh aragti cusub oo lagu faano sumcadda iyo mid la dhex geliyey xubin kasta oo shaqaale ah. Dalabkayaga ugu horreeya ee ganacsigu waa adeegyadeena
waddooyinka bilowga si hufan oo macaash leh ka dibna fiiriya ballaarinta shabakadda iyo kobcinta maraakiibtayada, dhammaan waxay ku xiran tahay baahida iyo xaaladaha suuqa. ”
Guddoomiyaha Guddiga SAA John Lamola ayaa leh, “Soo noqoshada SAA waxay bixin doontaa dheelitirnaan dheeraad ah oo xagga suuqa ah xagga qiimeynta tigidhada. Tan iyo markii uu xamuulku galay oo ka baxay samatabbixinta meheradda waxaa yaraaday awoodda maxalliga ah taasina waxay ka dhigan tahay in tikidhadu qaali noqdeen. Ku soo noqoshadayada cirka waxay ka dhigan tahay qiimayn tartan oo dheeraad ah waxayna awood u siin doontaa in dad badan oo Koonfur Afrika ah ay duuli karaan. ”
Lamola ayaa leh imanaysaKu soo noqoshada cirka ayaa sidoo kale ah awood dhaqaale oo weyn, gaar ahaan iyada oo xoogga la saarayo duulimaadyada xamuulka. “Dhaqaalaha marka laga reebo, waxaa sidoo kale jira arrin lagu faano. In la arko midabada dabada SAA ee laamiyada caalamiga ah kaliya kuma wanaagsana Koonfur Afrika laakiin qaaradda inteeda kale. ”
imanaysaMadaxa Fulinta Ku Meel Gaarka ah: Ganacsade Simon Newton Smith wuxuu leeyahay, “Waxaan nahay dhinacyo badan, sarbeebta dalka; weligeed ma lahayn taariikhda ugu sahlan, laakiin waa mid adkaysi leh, dadkeedu si sax ah bay u hanweyn yihiin waana dal aan marnaba la dhayalsan karin. Shaqadeenu waa inaan tusno adduunka in Koonfur Afrika ay dib u soo kabanayso oo ay bilaabi doonto safarka dib -u -soo -kabasho buuxda oo ka wanaagsan. Waxaan dib ugu bilaabaynaa si is-hoosaysiin leh laakiin hami weyn leh. ”
Duuliye Sare ee SAA Mpho Mamashela ayaa leh “Dhammaanteen oo aan joogi doonnaa xagga hore ee diyaaradda toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxaan si buuxda u fahmeynaa aragtida cusub ee SAA waana ku faraxsanahay inaan qeyb ka noqonno xilligan cusub. Waxaa naga go’an inaan gabi ahaanba kaamilno oo aan dadka Koonfur Afrika ka dhigno kuwo sharaf leh. ”